Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 3
October 21, 2020 ‘Hooyadeey waxay ka argagaxday ninka madow ee aan jeclaaday’
October 20, 2020 Gorfaynta buugga Dabinkii Jiraalka
October 20, 2020 Warbixin: Hoos u dhaca dhaqaale ee Somaliland iyo saamaynta Covid 19
October 19, 2020 Iswiidhan waxay rabtaa in booliska Noorwey ay yimaadaan dalkeeda oo ay ka shaqeeyaan
October 19, 2020 Falanqayn: Itoobiya ma dhisan kartaa dimuqraadiyad si fiican u shaqeysa oo ku saleysan federaal qowmiyadeed?
October 17, 2020 Faransiiska: Wuxuu ardaydiisa tusiyey sawir laga sameeyey Nabi Muxamed NNKH asigana waa la gowracay
October 17, 2020 Waa dhowr iyo toban jir inta mar ee la guursaday tiro malahan
Faham Darida Jeceylka Laga Haysto
Muslimo Cabdullaahi, August 6, 2020
Jecelka waxa uu leeyahay muhiimad aad u wayn oo aysan dadkeena intooda badan fahansaneen. Waxaan aminsanahay dadka intooda badan jeceelka waxa ay ka heestaan fahan qaldan, sababtoo ah waxaa inta badan kusoo dhaca maxkaxdooda jeceelka ninka iyo naagta dhexmara oo kaliya. Kaas xittaa ma’ahan mid qaldan ee waa nooc jeceelka ka mid ah laakiin inta badan kaas ayaa dadka wax badan ku haleyaan ayagoo si qaldan u isticmaala. Marka waxaa dhihi karaa waxaa jirta faham yari ku saabsan jeceelka qaybihiisa iyo muhiimada uu inoo leeyahay nolasheena. Haddii aad dadka intooda badan waydiiso jeceel waxa ugu horeeyo oo qofkasta maskaxdiisa ku …
Afrikaan.so, August 4, 2020
Afrikaan.so, August 1, 2020
Afrikaan.so, July 31, 2020
AkhriDhaqan, Af, iyo Taariikhda DuniddaSiyaasadda & Diplomasiyadda
“The type of person you are is usually reflected in your business. To improve your business, first improve yourself.” ― Idowu Koyenikan, Wealth for All: Living a Life of Success at the Edge of Your Ability Ganacsi walbo wuxuu sharaf ku leeyahay marka uu leeyahay qorshe ganacsi oo afka qalaadka lagu yiraahdo “Business plan”. Inaad ganacsi bilaawdo waa wax wanaagsan, hadana adiga oo kali ma ahaan ee dad badan ayaa qaba fikirkaaga oo kale oo maalin walbo ku fakira inay maalin un bilaabi doonaan fikrada ka guuxaysa maskaxdooda. Fikirka umadaha kama wada simna ee dadka Illaahay s.w.c wuxu u …
“Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination.” ― Oscar Wilde Inaad lacag abuurato ma ahan wax fudud. Laakiin hadana waa suurta gal, waxaana jira su’aalooyin badan oo ay dad badan isweydiiyaan maalin walbo oo illaahay keena. Waxaana ka mid ah siddee ku heshaa lacag. Sawabtoo ah dadka waxay aaminsanyihiin lacagta inay tahay waxa kali ee ay waxwalbo ku samaysani karaan. Waa sax lacagta waa wax aad waxwalbo ku samaysani karto haddii ay noqoto inaad guri iibsato, gaari iibsato, jaamacadaha ugu sareeyo dunidda inaad wax ka barato, waliba inaad xajka iyo dalxiis tagto meelwalbo oo aad …
Maxaad Ka Taqanaa Falanqaynta SWOT Analysis?
3-da Heerar Ee Istaraatijiyada Ganacsigaaga
Emayl Noocee ah Ayaad La Wadaagtay?
Sideed u hanan kartaa shaqaalahaaga